Euro (calaamad: €; code: EUR) waa lacagta rasmiga ah ee Midowga Yurub. Waqtiga hadda, 19 ka mid ah 28 dawladood ee xubin ka ah ayaa isticmaala euro; kooxdan dawlad-goboleedyada waxaa loo yaqaanaa aagga euro. Waa lacagta labaad ee ugu sarraysa suuqa sarrifka lacagaha qalaad kadib markii dollarka Maraykanka ah Euro waxaa loo qaybiyaa 100 senti.
Lacagta ayaa sidoo kale si rasmi ah u isticmaasha hay'adaha Midowga Yurub iyo afar dal oo Yurub ah, iyo sidoo kale iyada oo aan si toos ah looga helin laba qof kale, waxaana markaa loo isticmaalaa maalin walba by 343 milyan oo Yurub ah ilaa 2018 Qaar ka mid ah Yurub, tiro ka mid ah dhulalka dibadda ee xubnaha ka tirsan Midowga Yurub ayaa sidoo kale isticmaala euro sida lacagta. Intaa waxaa dheer, 290 milyan oo qof oo dunida oo dhan ah sida 2018 waxay isticmaalaan lacagaha lacagta
Euro waa lacagta labaad ee ugu weyn ee ugu weyn iyo sidoo kale lacagta labaad ee ugu caansan adduunka ka dib marka loo eego US dollar. Laga soo bilaabo Janaayo 2017, oo ka badan € 1.1 trillion oo wareeg ah, euro wuxuu leeyahay mid ka mid ah qiimaha ugu sarreeya ee lacagaha iyo baaqyada wareega adduunka, oo ka sarre maray maraykanka.
Magaca euro waxaa si rasmi ah loo ansixiyay 16 December 1995 magaalada Madrid. Euro waxaa loo soo bandhigay suuqyada maaliyadeedka aduunka sida lacagta lagu xisaabtamayo 1 Janaayo 1999, taas oo bedeshay Qaybta Lacagta hore ee Yurub (ECU) marka loo eego 1: 1 (US $ 1,1743). Qaddarka lacagta euro-da iyo lacagta warqadaha lacagta ayaa la geliyay wareegga 1-da Janaayo 2002, taas oo ka dhigtay lacagtii howl-maalmeedka ee xubnihii asalka ahaa, illaa May 2002-kii waxay gabi ahaanba beddeleen lacagihii hore. Inkastoo euro uu hoos u dhacay US $ 0.83 muddo 2 sano gudahood ah (26 Oktoobar 2000), wuxuu ka sarre maray dakhliga Maraykanka tan iyo dhamaadkii 2002, isagoo ka helay US $ 1.60 18 July 2008.
Heiko Otto (ed.). http://www.bis-ans-ende-der-welt.net/Europa-B-En.htm. Soo qaatay 2017-11-10. Maqan ama ebar |title= (caawin) (Ingiriisi)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro&oldid=221418"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Oktoobar 2021, marka ee eheed 19:42.